Lilt: Otu Neural Mmadụ + Igwe nzaghachi igwe maka ntụgharị na Nkọwa | Martech Zone
Gbahaa ewulitela mmadụ izizi akụrụngwa nzaghachi + ntụgharị maka ntụgharị asụsụ. Ndị na- ntụgharị asụsụ neural (NMT) sistemụ bụ ụdị izizi ya na ụlọ ọrụ teknụzụ ntụgharị ma gafere onyinye sitere na Google, Amazon, Facebook, Apple, ma ọ bụ Microsoft. Ndị ọchụnta ego na-achọ ịbawanye ụwa ha ugbu a nwere nhọrọ ka mma iji tụgharịa ọdịnaya ha ọsọ ọsọ na n'ụzọ ziri ezi.
A bịa na ntụgharị asụsụ, azụmahịa nwere naanị nhọrọ abụọ:
Ikpe zuru ezu ntụgharị asụsụ igwe dị ka Google Translate.
Lilt na-enyere ụwa abụọ kachasị mma aka site na ijikọta ọgụgụ isi na ike mmadụ iji nweta ogo ntụgharị asụsụ kachasị mma. Usoro NMT nke Lilt na-eji otu teknụzụ akwara eji eme ihe ugbu a iji kwalite okwu na njirimara ihe oyiyi, mana mmetụta ya na ụlọ ọrụ ntụgharị ahụ dị ọhụụ ma kwe nkwa. N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ndị ọkachamara maka ụlọ ọrụ toro NMT maka ikike ya iji kwado ogo ntụgharị asụsụ mmadụ na sistemụ ọhụrụ Lilt abụghị otu.
Na ntinye ederede nzaghachi nke Lilt, ndị ntụgharị na-enweta ntụnye NMT dabere na gburugburu ebe ha na-arụ ọrụ. Usoro NMT na-ahụkarị mmasị onye ntụgharị iji gbanwee echiche ya na oge. Nke a na - eme ka e nwee omume ọma nke ndị ntụgharị na - atụ aro na - abawanye mma, igwe na - enweta nzaghachi ka mma. Ntughari nzaghachi nke uzo na-eme ka mmadu di elu na ntughari igwe, nke na enyere ndi oru aka ijere otutu ndi ahia aka, belata onu ahia, ma belata oge-ahia Lilt na-efu 50% na-erughị na 3-5 ugboro ngwa ngwa.
Ihe ikpo okwu Lilt na-enye ihe ndị a:
Ahapụkwala Usoro MT Ọzọ - Lilt’s interactive, adaptive igwe translation system mmelite ya translation ebe nchekwa na MT usoro na-erughị nke abụọ ọ bụla oge onye ntụgharị na-akwado otu.
Enweghị njikọ nke ụmụ mmadụ na igwe - Jikọọ ntụgharị asụsụ mmadụ na igwe yana sistemụ azụmaahịa ndị ọzọ site na API dabere na ụkpụrụ. Ma ọ bụ jiri otu n'ime lilt na-eto eto ndepụta nke omenala njikọta.
Agile Project Management - a Kanban Project Dashboard na-enye gị ohere iji anya nke uche gị hụ ọnọdụ ndị ọrụ gị na ọrụ ntụgharị asụsụ dị ugbu a.
Na nyocha ntụnyere anya nke Zendesk duziri, a gwara ndị ntụgharị okwu ka ha họrọ n'etiti ntụgharị ntụgharị NMT ọhụrụ nke Lilt na sistemụ ntụgharị ntụgharị igwe nke Lilt gara aga (MT). Ndị ọrụ họọrọ NMT ka ha bụrụ otu ma ọ bụ dị elu karịa ntụgharị asụsụ gara aga 71% nke oge ahụ.
Anyị hụrụ njikọ dị n’etiti onye ntụgharị mmadụ na ike ha ịzụ igwe ọrụ MT anyị. Ọ pụtara na mgbe anyị tinyere ego na nsụgharị mmadụ, ọ ga-enyekwa aka na ogo nke igwe ọrụ MT anyị. Melissa Burch, onye njikwa nke nkwado ntanetị na Zendesk
Ndị rụpụtara Lilt John DeNero na Spence Green zutere mgbe ha na-arụ ọrụ na Google Translate na 2011, wee bido Lilt na mbido 2015 iji weta teknụzụ na azụmaahịa ọgbara ọhụrụ na ndị ntụgharị. Lilt na-enyekwa ihe ngwọta dị iche iche na ntụgharị asụsụ ecommerce.
Tags: ntughari mmaduliltebeakụkụngwa igwentụgharị asụsụ igweneuralntụgharị asụsụ neuralneural networktranslationntụgharị asụsụOnyebuchi